RASMI: Kooxda kubadda cagta Arsenal oo magacaabatay tababare ku xigeen cusub – Gool FM
(London) 17 Juunyo 2019. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa halyeyga naadiga ee Freddie Ljunberg u magacaabtay tababare ku xigeenka kooxda koowaad, isagoo shaqada soo geli doona 01 bisha Luuliyo ama July ee soo aaddan.
Tababare ku xigeenkii koowaad ee kooxda Arsenal, Steve Bould ayaa xilkaas laga qaaday waxaana loo dhiibay shaqo kale oo ah inuu tababare u noqdo kooxda Arsenal ee da’doodu ka hooseyso 23-sano jirrada.
Arrintaan ayaana la warinayaa inay qeyb ka tahay isbedello uu tababaraha Arsenal ee Unai Emery ku sameynayo shaqaalihiisa ka hor xilli ciyaareed cusub ee horyaalka Premier League.
Ljungberg oo haatan ah tababaraha kooxda Arsenal ee da’doodu ka hooseyso 23-sano jirrada ayaa sheegay inuu shaqadiisa cusub ku faraxsan yahay, waxaana uu yiri isagoo la hadlayey website-ka rasmiga ah ee kooxda Gunners;-
“Waxaan aad ugu faraxsananahay fursaddaan iyo inaan la shaqeeyo oo aan horumarin ku sameeyo ciyaartoyda waa weyn iyo kuwa akadeemiga ka soo baxaya, oo aan ka garab shaqeeyo Macallin Unai, isla markaana aan gacan ka geysto inay kooxda Arsenal koobab ku guuleysato.”
Dhinaca kale Steve Bould ayaa isaguna tababare u noqon doona kooxda Arsenal ee da’doodu ka hooseyso 23-sano jirrada, sida warbixinta lagu sheegay.